> Resource > Mac > MacBook Pro Photo Recovery Tutorial
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka MacBook Pro?
Waxaan dhawaan la tirtiro folder sawir aan Pro MacBook. Ma aanan helin iyaga qashinka aad. Waxay yihiin sawiro waxaan qaatay reer bariga dhexe oo dhan iyo Europe ee 3 sano ee lasoo dhaafay. Ma jiraa hab aan soo kaban karto, iyaga? Anigu ma qaadan kartaa khatarta iyaga oo dhan laga badiyay. Caawimaad kasta oo la mid aad wax ku oolka ah karaan.
In kastoo MacBook Pro waa sheyga ugu wanaagsan ee taxanaha Apple Mac, dhibaatada soo gaartay sawirka weli waa arrin caadi ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sababaha sawiro laga badiyay ka MacBook Pro: MacBook Pro uu hoos xidhay in tirtirka lama filaan ah, ula kac ah ama shil, formatting drive adag, jeermiska fayraska, shaqo gaba ah hardware iyo software.
Sidaas, sida inuu ka soo kabsado images tirtiray ka MacBook Pro? Xaqiiqda aad sawiro tirtiray waa in ay kaliya geli karin on your Pro MacBook yihiin ka hor inta files cusub overwrite meel ay qabsadeen, taas oo macnaheedu yahay waxaad leedahay fursad aad u weyn in ay dib u hanato aad sawiro lumay la utility ah soo kabashada dhinac saddexaad.
Qaado Wondershare Data Recovery for Mac sida tusaale. Kani waa barnaamij soo kabasho MacBook Pro sawir oo awood aad ay dib u hanato lumay, tirtiray iyo xitaa formatted sawiro ka MacBook drive adag Pro oo warbaahinta kaydinta dibadda. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo u ah xagga hoose ka dibna habka tirtiray kabashada sawir MacBook Pro in qasabno yar mouse.
Kabsado Images tirtiray ka MacBook Pro in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Ku rakib codsiga Wondershare Data Recovery for Mac aad MacBook Pro oo aan bilowno
Codsiga waxaa ugu dhaqsiyaha badan lagu soo bandhigi doonaa sida image hoose. Halkan waxaa lagu siin doonaa fursado kabashada qaar ka mid ah. Waxaad si taxadar leh ka akhrisan kartaa tilmaanta iyo dooro ikhtiyaarka ugu fiican ee aad u.
Aynu qaadan "lumay Recovery File" mode sida tusaale.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo codsiga on mugga in sawiro aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan sawiro laga badiyay
In talaabo fudud, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mugga iyo guji "Scan" inaad raadiso photos lumay.
Haddii photos yihiin formatted ka Pro MacBook, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray sawiro ka MacBook Pro
Hadda waxaad ku eegaan kartaa sawiro laga helay ceshan iyaga sida aad rabto. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan aad sawiro doonayay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad MacBook Pro.
Si looga fogaado sawiro ka soo kabsaday la overwritten, fadlan dooro mugga cusub si ay u sii.